सुरक्षा रणनीतिवारे छलफल गर्न १२ जिल्लाका प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुख रुपन्देहीमा भेला – www.janabato.com
सुरक्षा रणनीतिवारे छलफल गर्न १२ जिल्लाका प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुख रुपन्देहीमा भेला
१६ बैशाख २०७५, आईतवार १६:१२ April 29, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
बुटवल, प्रदेश ५ को प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी रुपन्देहीको मणिग्राममा सुरु भएको छ ।
प्रदेशको आन्तरीक सुरक्षा अवस्था बुझ्न र थप सुरक्ष्ाँ रणनीति बनाउन गोष्ठी आयोजना भएको हो । प्रदेशको छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र नभएका बेला कसरी सुरक्षा संयन्त्र बनाउने र प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कसरी चुस्त पार्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले वर्तमान सुरक्षा अवस्था बुझ्दै भावी रणनीति बनाउन गोष्ठी आयोजना गरेको बताउनुभयो । यस्तो गोष्ठी सबै प्रदेशमा गर्ने गृहमन्त्रालयको योजना छ । गोष्ठीमा ५ नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखको सहभागीता छ । गोष्ठीमा निर्देशनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेपाल प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, ससस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनाल लगायत आउनुभएको छ ।
गोष्ठीमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री, आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सचिवहरु सहभागी हुनुभएको छ । गोष्ठीले आजै प्रदेश ५ को सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने छ ।
← सबल नेपाल साप्ताहिकले मनायो बृद्धाश्रममा बार्षिकोत्सव
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्र सुरु →
अक्टोबर क्रान्ति शतबार्षिकी समापन समारोह मंसिर १५ गते प्रज्ञा भवनमा हुने
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार १३:०६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on अक्टोबर क्रान्ति शतबार्षिकी समापन समारोह मंसिर १५ गते प्रज्ञा भवनमा हुने
प्रदेश नं. ५ ले गर्यो यस्तो निर्णय
१८ कार्तिक २०७५, आईतवार १३:३४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on प्रदेश नं. ५ ले गर्यो यस्तो निर्णय
दुई पार्टीले गरे लेनिनको अपमान, फोटो र नारा गायव, एमाले–माके कार्यक्रममा लफडा
९ बैशाख २०७५, आईतवार ०९:४० जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on दुई पार्टीले गरे लेनिनको अपमान, फोटो र नारा गायव, एमाले–माके कार्यक्रममा लफडा